चौध महिनादेखि झोलामा आन्द्रा « Loktantrapost
चौध महिनादेखि झोलामा आन्द्रा
२७ चैत्र २०७३, आईतवार ०७:४९
मेचीनगर । हेर्दै आङ जिरिङ्ग हुने अवस्था । संसारका सबै चोटहरु यिनलाई नै भगवानले दिए जस्तो । नोवेल मेडिकल कलेजको बेडमा उपचाररत उनी उत्तरी मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं. १ का ४० वर्षीय मनबहादुर राई हुन् । पेटबाट बाहिर निस्किएको आन्द्रालाई उनले विगत १४ महिनादेखि प्लास्टिकमा पोको पारेर जतनसाथ स्याहारिरहेकै छन् ।
विगत केही वर्षदेखि पेटका विरामी उनले ग्यास्ट्रिकको उपचारमा धेरै खर्च गरिसकेपछि मात्र आन्द्राको अल्सर भएको थाहा पाए । १४ महिना अघि धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उनको पेटको शल्यक्रिया गरियो । आर्थिक अवस्था नाजुक रहेका उनको शल्यक्रिया र उपचारमा चन्दा खोजेर ५ लाख खर्च गरिएको थियो ।
उपचार र हेरचाहमा सघाइरहेका छिमेकी कविन्द्र राईका अनुसार चन्दा र घरको जेथो मिलाएर हालसम्म उनको उपचारमा साढे ७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर डाक्टरले पहिलो शल्यक्रिया गरेर ठूलो आन्द्रा पेट बाहिर निकालिदियो । जो अहिलेसम्म खर्च अभावकै कारण पेटभित्र राख्ने अर्को शल्यक्रिया गर्न सकिएको छैन । धरानले थप शल्यक्रिया गर्न ३ लाख रुपैयाँ लाग्ने बताएपछि आर्थिक अभावका कारण मनबहादुरको आन्द्रा बाहिरको बाहिरै रहेको हो । धरानले निःशुल्क उपचार नगरे पछि हाल विराटनगरको नोबेल पुर्याइएको रहेछ ।
तल्लो पेट चिरेर डाक्टर निकालिदिएको आन्द्रालाई सामान्य प्लास्टिकमा पोको पारिएको छ । त्यही आन्द्राबाट दिसाजन्य फोहोर बाहिर निस्कने गर्दछ । पेटबाट पाचन भएको खाद्य पदार्थ मलद्वारसम्म पुग्न पाउँदैन । दिनमा १० पटकसम्म त्यही बाहिरी आन्द्राबाट फोहोर बाहिर निस्कन्छ ।
‘आफ्नो जेथो सबै सकियो, कसैले सहयोग गरिदिए यो आन्द्रालाई पेटभित्र हाल्न सक्थेँ कि’, गहिरो पीडा पोख्दै मनबहादुर मलिन स्वरमा भन्छन्–‘मेरो उपचार हुन नसक्दा परिवारको पनि बिजोग भयो ।’
छिमेकी कविन्द्रका अनुसार नोबेल हस्पिटलले अबको ३ महिनाभित्रमा नयाँ शल्यक्रिया गरेर बाहिरको आन्द्रालाई भित्र पसाइसक्नु बताएको छ । अल्सर भएको भागलाई फ्याँकेर पाइपले जोड्दा मात्र आन्द्राले पहिलेकै जस्तो काम गर्ने सम्भावना रहन्छ । नोवेल हस्पिटलले उनको बेड चार्ज र उपचार निःशुल्क गरिदिने जनाएको छ । तर उनको स्याहार गर्न आवश्यक कुरुवाको बन्दोवस्त गर्न र यस अघि उपचारका लागि लिइएको ४ लाख ५० हजार ऋण तिर्न चन्दा सङ्कलन गर्नुको विकल्प छैन ।
मनबहादुरको एक पत्नी, २ छोरा र २ छोरी छन् । तर उनका दुबै छोरा घरको गरीवी अवस्थाका कारण सानैमा घर छाडेर बेपत्ता भएका रहेछन् । छोरी र पत्नीसँग उनी बस्दै आएका छन् । अति सामान्य किसान परिवारका उनीसँग अब खर्च गर्ने कुनै सामथ्र्य छैन ।
हालसम्म छिमेकीहरुले नै गाउँमा चन्दा उठाएर कुरुवा खर्च जुटाउँदै आएका छन् । कतैबाट दयालु महानुभावहरुले सहयोग दिन चाहेमा ‘९७४२६८०२५९ नं. को मोवाइल फोनमा कविन्द्र राई (छिमेकी)लाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ’ भनी फेसबुकमा समेत सन्देश प्रकाशित गरिएको छ ।
‘यस्तो दुर्दशा पीडादायी हुन्छ, मनबहादुरलाई उपचारमा सहयोग गर्न हामी गाउँलेले सल्लाह गरेरै फेसबुकबाट आह्वान गरेका हौँ’, कविन्द्र भन्छन्–‘केही दिनमै मनबहादुरको पत्नीको नाममा बैङ्क खाता खोल्दैछौँ ।’
दाताबाट सहयोग जुटेमा मनबहादुरको नयाँ शल्यक्रिया गरेर आन्द्रालाई पेटभित्रै राख्ने र उनलाई बचाउने गाउँलेहरुको योजना छ । गाउँलेहरु पनि सबै गरीव नै छन् । सकेको अलिअलि आफुबाटै जुटाएका उनीहरुले अब बाहिरबाट सहयोग आउने आशा गरेका छन् ।